Idi China Water sooks factory na suppliers |Arex
Igwe mmiri na-amịpụta mmiri rọba na mmiri na-agbapụta mmiri dị ka ụdị eriri rọba eji ebufe na ịkwanye mmiri.Enwere ike iji eriri mmiri rọba na ma nrụgide dị mma na gburugburu ebe ọrụ nrụgide na-adịghị mma maka ịmịnye na ịwụsa mmiri ụlọ ọrụ na mmiri na-anọpụ iche na okpomọkụ nkịtị.A na-eji ya eme ihe na nke m, ụlọ ọrụ, ọrụ ugbo, injinia obodo na ụkpụrụ ụlọ.
Mmiri mmiri na mgbapu sooks bụ a vasatail roba imi na mwepu sooks ewu nyere ígwè waya na textile nkwado.Ọkpụkpụ a dabara adaba maka ngwa mgbapụta na-ajụ ọkara na nke dị arọ ebe ịdịte aka na ogologo ndụ bara uru.A na-enye ya n'ọtụtụ dịgasị iche iche, nhọrọ na-enye ohere na nrụgide na ibu arọ.Enwere ike ịmebe ihe ruru 24 ″ ID yana nkọwapụta gị.
Nrụpụta Ọkụ Mmiri Rubber:
Tube:Nwa, dị nro, NR, ogige rọba SBR.
Nkwanye:Multi plies High ike sịntetik eriri na helix ígwè waya
Mkpuchi:Nwa, dị nro, echiche akwa, ogige roba SBR
Ngwa mmiri mmiri rọba:
Ọkpụkpụ mgbidi siri ike emebere maka ịmịpụta mmiri na mwepu mmiri, yana mmiri ndị na-adịghị emebi emebi a na-eji na-ewu ebe a na-ewu ọkụ aja aja.Ezigbo eriri mgbapu mmiri dị elu maka ọnọdụ siri ike na-arụ ọrụ siri ike.
Okpomọkụ arụ ọrụ:-30℃ (-22℉) ruo +80℃ (+176℉)
Atụmatụ mmiri mmiri rọba na-amịpụta:
ihu igwe na ozone eguzogide.
Ngwakọta mkpuchi mgbochi ịka nká
Mgbanwe na ịdị arọ
Nke gara aga: Ntupu ihuenyo dị mma nke polyurethane
Osote: Akụkụ Slurry Pump Parts
© Nwebiisinka 20102021: Ikike niile echekwabara.> Valve Control Pneumatic Njikọ Mgbasawanye Seismic Ntupu ihuenyo Njikọ Mgbasa Ọla 50mm roba hose naagbanwe agbanwe Valve mmanụ ihe mmịfe Ngwaahịa niile